वर्णनात्मक निबन्ध | मझेरी डट कम
editor — Sun, 03/26/2017 - 00:22
संस्कृत शब्दको “काष्ठमण्डप” को अपभ्रंशबाट बनेको काठमाडौँ शब्दलाई नेपालको राजधानीको रुपमा चिनिन्छ । जीवनदर्शनको खोजीमा सबै लालची बन्छन् नै । जीवन के हो ? कहाँको जीवन र कस्तो जीवन सुखदायी बन्छ ? यी त्रिकालदर्शी मुनी पनि जान्न असमर्थ हुन्छन् । ब्रह्माण्डमा जीवन, अन्तरिक्षमा जीवन, धर्तीमा जीवन, देशमा जीवन, जिल्लाको सहरमा जीवन, गाउँमा जीवन एउटा परिवारमा जीवन धेरै खालका जीवन भेटिन्छन् । जीवन त्यो हो जुन आमाको गर्भ भित्रदेखि लिएर बाहिर निस्केपछि श्वास चल्यो र अन्तिम श्वास जहिलेसम्म चल्छ, त्यो समय अर्थात् जन्म र मृत्युको बीचको अबधि नै जीवन हो ।
editor — Sun, 05/15/2016 - 04:42
लेखक भटाभट बढ्दै । पाठक धमाधम हराउँदै । नेपाली साहित्यको हाल । पाठबाट पाठक टाढिनुमा ठूलो ताल त लेखककै देख्छन् भविलाल ।
Sarad Pradhan — Sun, 01/04/2015 - 18:09
विश्वका २८ वटा मुलुकहरूवाट प्रतिनीधित्व गरी आएका ३० यूगल जोडीहरूले यस वर्ष भेलाइनटेन डे को दिन समुद्रको १० मीटर गहिराई भित्र औपचारिक रुपमा विवाह दर्ता गरी विश्वमा नै एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गरे । थाईल्याण्डको दक्षिणभागमा रहेको त्राङ्ग भन्ने ठाउमा सम्पन्न उक्त विवाह संसारकै सबैभन्दा बढी जोडीहरूले पानी मुनी विवाह गरेकोरुपमा गिनीस बुक अफ रिकर्डमा पनि दर्ता हुने छ ।
Mohansinghkc — Sun, 06/29/2014 - 17:55
हरेक मान्छेको आफ्नै हेराई, बुझाई, देखाई र भनाई हुन्छन् । कुनै नौलो कुरा भन्न गईरहेको पनि हैन तर किन यो देशमा दुईवटा प्रणीले विषय बस्तु बन्ने मौका वा स्थान पाए ? प्रशस्त बिषय बस्तु हुदा हुदै पनि यी नै छानिनुका पछाडि पक्कै केही न केही त बिशेषता होला नै ।
सुडान :– अफ्रिका महादेशमा भौगोलिक दृष्ट्रिकोणले सवै भन्दा ठूलो देश सुडान हो, यस देशको क्षेत्रफल २, ५०५८, ८१३ वर्ग कि.मी मध्ये डारफरको मात्र ५०३, १८० वर्ग कि.मी. रहेको छ ।
बास्तवमा माटो पृथ्वीको उपल्लो खुकुलो त्यो सतहको त्यो पदार्थहो, जो चट्टानहरू खिइएर अथवा टुक्रिएर वनस्पति तथा जीवजन्तुका अवशेषहरू मिलेर बनेको हुन्छ ।
editor — Wed, 01/08/2014 - 19:38
श्रवणकुमार देव शान
पूर्वमा फर्सेठ, पकरी र देउरी भरूवा गाविस, पश्चिममा जमुनी मधेपुरा, उत्तरमा मलेठ तथा दक्षिणमा इटहरी विष्णुपुर र बोरिया गाविसको बीचमा रहेको राजविराज नगरपालिका नेपालकै ऐतिहासिक नगरपालिका हो । यो नगरपालिका विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा (८८४८ मि.) रहेको अञ्चलको सदरमुकाम पनि हो । विभिन्न किसिमको इतिहास रच्न र धेरै नाम कमाउन सफल यो नगरपालिका पहिला जस्तो थियो, हालसम्म त्यही अवस्थामा रहिरहेको छ । केही ठूला घर बन्नु र भित्री भागहरूमा कच्ची तथा ग्राभेल सडकको विस्तार हुनु जस्ता विकासीय काम भएका छन् ।
Mohansinghkc — Thu, 01/17/2013 - 19:28
कुनै यस्तो दिन थिएन, आउदा जादा एक दुई वा तीन चारवटासम्म पनि झुण्डििरहेको नदेखियोस्े । शुरु शुरुमा त खासै चासो भएन देखेर, कि जानेर कि भोगेर अनुभव गर्ने हो
kbs — Sat, 10/22/2011 - 20:31
अहिले नेपालका सञ्चार माध्यममा कि त मुसाको चर्चा छ, कि त गुदपाक भण्डार र मिठाइ पसलेको कर्तुतको छ ।
समयले कोल्टे फेरिँदै जान्छ जिन्दगीका रङ्गहरू। चाड-पर्व र संस्कृतिका अनेकौं रूप र पक्षहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्।
Trichandra — Wed, 07/20/2011 - 20:26
'आलु' शब्दको अर्थलाई नेपाली शब्दसागरमा ''अन्न, तिउन, तरकारी र अचारमा मिलेर वा सट्टामा भोजन बन्ने कन्द विशेष, कासकन्द, कासालु, पेचक'' भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालीमा खासै राम्रो अर्थ दिंदैन 'आलु खाने' भन्ने शब्दले । 'आलु खाइस् !' भनेर कसैले भन्यो भने जो कसैको पनि कन्सिरी तातेर आउँछ ।
नेपालमा हरेक वर्ष गोबर्द्धन पूजाको दिन आलु कवि महोत्सव मनाइने गरिन्छ । सहभागी कविहरुले आलुका ५ थरिका परिकार खाएर आलुकै बखान स्वरुप कविता वाचन गरेर 'आलु कवि महोत्सव' मनाउँदै आइरहेको धेरै वर्षभैसकेको छ ।
सिमलचरी अथवा गोलसिमल नेपाली लोकविश्वासमा बाँचेको अनौठो चरो हो । यसप्रतिको नेपाली लोकविश्वास आफ्नै परम्परागत आधार तथा पत्यारमा जुगौँदेखि अडेको पाइन्छ । सिमलचरीलाई उसका स्वरको आधारमा 'गोलसिमल' भनिएको बुझिन्छ ।
तिम्रो आत्मीयतामा (गजल)